कथा: अन्तिम मान्छे | Jukson
कथा: अन्तिम मान्छे
“ति मी मलाई छाडेर कसरी जान सक्छौ यसरी ? हामी जीवनको अन्तिम सँघारमा पुगिसकेका त छैनौँ ।”
सकिता कदाचित् आवेशमा थिइन । ऊ आफ्नो अनुनयलाई कृत्रिम आवरण दिइरहेकी थिई । आवाजमा न्यानो अनुरोधभन्दा औपचारिकता बढी मिसिएको थियो ।
मीनबहादुर चुपचाप उभियो ।
ऊ प्रतिरोध जनाउने परिस्थितिमा थिएन । ऊ जीवनको यो परिच्छेदलाई यहीँ छाडेर अगाडि बढ्न चाहिरहेको थियो । सायद सकिताको स्वच्छन्दता र अराजकताबाट पर अलग इतिहासको हिस्सा बन्न चाहन्थ्यो ।
“जीवन यात्राको कुरा गर्ने गथ्र्यौ नि तिमी ? अब आएर यात्रामा म रहन्न भनेर कसरी सम्झायौ तिमीले आफैँलाई ?” सकिता भावनालाई शब्दमा पोखिरहेकी थिई ।
अब फेरि पुरानो सम्झौताको प्रसंग सम्झाउनु जरुरी छ र ? उसको अनुहारमा विस्मयका भाव बेजोडले उत्रिँदै बिलाउँदै गरिरहेका थिए ।
“मसँग तिमीलाई दिने कुुनै जवाफ छैन । उत्तर दिन आवश्यक पनि ठान्दिनँ । तिमी मभित्र मक्किएका सम्झौताका उल्झन खडा गर्ने कोसिस नगर । एकतर्फी सम्झौताको के प्रसंग उठाउने अब ?”
मीनबहादुरको आवाजमा असीम आवेश मिसिएको थियो । सायद यो स्वाभाबिक थियो ।
“बस यहाँ आरामले । तिमीले भुल्यौ, आफ्ना अठोटहरू अनि ती वाचाहरू ?” फेरि प्रश्नहरूलाई जोड्ने प्रयास गरी सकिताले ।
ऊ चुपचाप पुरानो काठको मेचमा थचक्क बस्यो । लामो सुस्केरा निकाल्यो ।
“तिमी थाकेका त छैनौ, किन फेरि सुस्केरा ?” सकिता प्रश्नमाथि प्रश्न थोपर्न अभ्यस्त लाग्छे ।
ऊ सायद परिवर्तन चाहन्छ । आवाजमा तिक्तता झल्किन्छ । “तीन वर्षसम्म सँगै बस्दा हामीबीच कुनै त्यस्तो त भएन, जसले गर्दा आज तिमी मलाई रोक्न सक । हामीले एकअर्कालाई माया पनि त गरेनौँ सायद ।”
मीनबहादुरले आफ्नो आवाजलाई सुस्तरी ओकलेको छ । मानौँ ऊ अगाडि हिँड्न पर्ने बाटोहरूका लागि शक्तिको सञ्चय गर्न चाहिरहेको छ । सकिता चुपचाप उसलाई ताकेर हेरिरहेकी छे ।
“तिमीलाई स्वच्छन्द बाँच्नका लागि कतिसम्म म पर्दा हालिरहन सक्छु र ? तिम्रा भन्नेहरूबाट कहिले तिमी थाक्छौ होला र मेरो पालो आउला । तिमीलाई माया गर्न भनेर म कतिसम्म कुरिरहन सक्छु भन तिमी ?” मीनबहादुरको आवाजमा वेदना भरिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सकिता शब्दविहीन देखिन्छे । ऊ आँखाका परेलीभित्रबाट जवाफ हेर्न सक्दिन ।
“के म यति टाढाको पराइ भइसकेँ तिम्रा लागि ? जीवन भोगाइको परिवेश त फरक भएको होइन हाम्रो !”
“तिमीलाई माया गर्नेहरूको भीडमा म त पर्दिन नि हैन र ? एउटै छानोमुनि बस्दैमा एकअर्काप्रति समर्पणका भावहरू प्रकट हुनुु आवश्यक पनि त हुँदैन सायद ।”
“मैले तिमीलाई भन्ने हो कि तिमीले बुझेर गर्ने हो ?” सकिता आँखाभरि आँसु उभारेर शब्दहरू ओकल्न अभ्यस्तझैँ देखिन्छे ।
“एउटी जवान आईमाईले के चाहन्छे र कसरी चाहन्छे भन्ने कुरा तिमीले बुझ्न सक्दैनौ भन्ने लागेर नै अन्यत्र लागेकी हुँ । मैले धेरै प्रतीक्षा गरेकी थिएँ तिम्रा स्पर्शहरूको । यसमा मेरो केही पनि दोष छैन । मेरो तिर्सना मेट्न तिमी पानी लिएर आएनौ र म आफैँ पँधेरो धाउन थालेँ । एउटा जवान आईमाईलाई रोटी र कपडाले मात्र खुसी बनाउन सकिन्छ भनेर कसरी अनुमान लगायौ तिमीले ?” उसले आफ्नो कुरालाई सरासर राखी र आफ्नो मन हलुका बनाई ।
मीनबहादुर चुपचाप उभिएको छ ठिंग । किंकर्तव्यविमूढ छ । सकिताले उसको पुरुषत्वमाथि भयानक प्रहार गरेकी थिई सायद ।
आफ्ना विगतका सम्झौताहरूको परिवेशमा उसले आफूलाई उभ्याउन खोज्यो । उसले जसलाई इज्जत र आदर ठानेको थियो, त्यसलाई सकिताले कमजोरीको रूपमा लिएकी थिई । यो यथार्थ जानेर उसलाई दु:ख लाग्यो । यथार्थहरू पीडादायी नै हुन्छन् ।
एकअर्कालाई बुझ्ने र अपनाउने दृष्टिकोणमा भिन्नता देखिएको थियो । एउटा लोग्नेमान्छे र स्वास्नीमान्छेबीचमा यौन र भौतिक उपभोगको मात्र झिनो फासला हुन्छ भनेर सोचेको थिएन उसले । सम्बन्धहरूलाई परिभाषित गर्न नसक्दा यस्ता उल्झनहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था पैदा हुने रहेछ । आफूभन्दा अरूको ख्याल बढी गर्न थाल्यो भने उल्झनहरू बढ्ने रहेछन् जीवनमा ।
ऊ यथार्थको भुमरीमा पछारिएको थियो । समयले ल्याउने परिवर्तनहरू प्रिय मात्रै हुन्छन् भन्ने पनि त हँुदैन । आफूबाट समेटिन नसकेको जीवनलाई फर्केर यसो चिहाउन खोज्यो उसले । शून्यतामा बिलाउन सकेनन् ती यादहरू । उसको शालीनता र सदाचारले उसलाई चोखो देखाउन सकेको थिएन । जीवनका अवयवहरू छताछुल्ल पोखिएका छन् परिवेशभरि । ती अवयवहरूलाई सँगालेर आफ्नो परिभाषा निर्माण गर्न पनि सकेको छैन उसले ।
फकल्यान्डको लडाइँले निमिट्यान्न बनाउन नसकेको स्पर्शविहीन भावनाहरू चोटग्रस्त बनिरहने गरेका छन् । अनायास सुरु भएको थियो त्यो कहानी, जसलाई उसले कर्तव्य मानेको थियो, त्यो अन्यथा बनेर उभिएको छ । ऊ पीडादायी विगतलाई पछाडि छाडेर अगाडि बढ्न कटिबद्ध बनेको छ एकप्रकारले । ऊ भुल्न चाहन्छ त्यो कहालीलाग्दो विस्मयकारी विगतलाई ।
वातावरण चिसो छ । परिस्थिति उसको पक्षमा छैन सायद । ऊ लडाइँ जिते पनि जीवन हारेको मान्छे ठान्छ आफूलाई । उसका आफ्ना भन्ने मान्छेहरू छैनन् । जसलाई उसले आफ्नो ठानेको थियो, उ विद्रोही बनेकी थिई । ऊ जाओस् पनि कता ? जाने कुनै ठाउँ छैन । कुनै गन्तव्य छैन ।
ऊ लडाइँबाट बाँचेर घर फर्कियो । कुन प्रयोजनका लागि बाँच्यो ? त्यो उसैलाई थाहा छैन । उत्तरविहीन सोधाइहरूको शृंखलाहरू समेटेर ऊ अविछिन्न उभिएको मान्छे फगत मान्छे हुनु र उपयोगिता नहुनुको दोसाँधमा असरल्ल छ । ऊ बेजोडले परित्यक्त बनेको छ । जीवनले उसलाई यसरी अपरिभाषित प्रस्तुत गर्न आजसम्म सम्हालेर राखेको थियो भनेर विश्वास गरोस् पनि कसरी ?
मन्दमन्द चिसोले काठमाडौँको वातावरणमा कठोरता भर्दै थियो । मीनबहादुरले झोलाभित्र जीवनका उल्झनहरूलाई थन्क्याइरहेको छ । जीवनले थुप्रै थकाइ दिएको छ उसलाई । विद्यालयदेखि गाउँ र बस्तीभरि ऊ एउटा पहिचानभन्दा पनि अरूको सहयोगीको भूमिकामा पोखिइरह्यो । बस्तीबाट बाहिरिएपछि ऊ एउटा सडकमा बाँच्ने अभ्यस्ततामा पुग्यो । गरिएका उपलब्धिहरूले कुनै रचनात्मक परिणाम नदिएपछि ऊ आफ्ना उपलब्धिविहीन यथार्थहरूलाई किल्लामा झुन्ड्याएर फुर्सद लिन हतारिएको पनि थिएन । ऊ सधँै अघि बढ्ने तरखरमा हुन्छ तर अगाडिको यात्राले उसलाई अड्काउने गर्छ । एउटा अथक् र पृथक् हिँडाइको अपेक्षा बोकेर ।
भीडमा आफ्नो भन्ने कोही छ कि भन्ने आशा पनि असमञ्जस्यतामा बदलिइरहेको हुन्छ । मान्छे, मान्छेहरूबाट किन भागिरहेका हुन्छन्, उसलाई थाहा छ्रैन । आफ्ना युद्धहरूसँग आफैँ लड्ने हो । अर्थहरूको डुंगुर लगाएर अनुमानको खेती उमार्नेे अभ्यास निस्तो लाग्छ ।
उन्मुक्तितिरको आवाज या एउटा सानो प्रतिरोध ऊ फरक आयाम अपनाउन चाहन्छ । ऊ उपलब्धिको भोको छ । पाउन नसकेका उपलब्धिहरूप्रति उस्तो आसक्त पनि छैन । उसको प्रयत्न जारी नै छ र निरन्तर छ । उसको आँखामा एउटा सपना थियो, जसको पछाडि हिँडेर मीनबहादुरले धेरै नै हन्डर खाएको छ । धेरै नै जोडले हार र उपेक्षाहरूबाट पिटिएको छ । तर, उत्साहहरूलाई मर्न दिएको छैन उसले । ऊ एक्लो यथार्थको परिधिमा बाँधिएर संकुचित बाँचिरहन सक्दैन ।
यस्तै सोचहरूलाई समेटेर नयाँ युगको आत्मसात् गर्ने परिकल्पना गरेर बिस्तारै पाइला बढाइरहेको थियो । बाटो सुनसान थियो । उसको गन्तव्य कतातिर थियो, उसलाई राम्ररी थाहा थिएन । ऊ बाटोले जहाँ पुर्‍याउँछ, त्यहीँ जान चाहिरहेको थियो । सकिता उसको बाटो छेक्न उभिएकी थिई वा हिजोका साथहरूको क्षतिपूर्तिको हिसाब खोजिरहेकी थिई, उसैलाई थाहा थिएन ।
“जाने नै भयौ त भन्या तिमी मीनबहादुर ?” उसले हतास प्रश्न तेस्र्याई ।
व्यवधानहरूबाट म भागेको होइन भनेर स्पष्टीकरण दिन चाहेन उसले सायद । “मेरो जानु र नजानुको बीचमा तिमी कुनै परिस्थिति निर्माण गर्न नखोज । म जान्छु या जान्न । त्यो अब सान्दर्भिक अर्थ राख्ने कुरा पनि भएन ।”
सकिताले अन्तिम प्रयास गर्न चाहिन सायद ।
“तिमी यहाँबाट गई हाल । त्यही नै ठीक होला मलाई ।” ऊ स्तब्ध पनि छैन ।
“नरहे बाँस न बजे बाँसुरी । तिमीबिनाको परिवेशले मलाई बढी स्वतन्त्रताको अनुभूति दिने छ भन्ने मलाई लाग्छ ।”
“तिमी यहाँबाट गैहाल र छिटो जाऊ । सकिता आवेशमा थिई ।”
मीनबहादुरले फर्किएर सकितातर्फ हेरेन । बाटोमा सन्नाटा व्याप्त छ । ऊ बाटोमा मिसिएको छ । बाटोले उसलाई आफ्नो ठानेको पनि छैन सायद । अलिकति हिँडेपछि पाइलाहरू बोझिल भएजस्तो महसुस गर्‍यो उसले । सायद सकिताले बढाएको उल्झन र उसले पुर्‍याएको चोटलाई भुल्न चाहन्छ ऊ ।
ऊ बस स्टपमा पुगेर उभियो । बस चढेर अब कहाँ जान्छ, उसैलाई थाहा छैन । एउटा झोला छ अनि ऊ छ । ऊ लामो सुस्केरा हालेर नजिकैको बेन्चमा थचक्क बस्यो । दुइटा हत्केलाले अनुहार छोप्यो र लामो लामो श्वास फेर्‍यो । मान्छेहरूको भीडमा उसले आफूलाई एक्लो महसुस गर्‍यो ।
अनायास कुममा कसैले घचघचायो उसलाई । उसले टाउको उठाएर हेर्‍यो । सकिता आँखाभरि आँसु भरेर उसको अगाडि उभिएकी थिई ।
“तिमीबिना म बाँच्ने कुरा भएन । तिमी फर्किंदैनौ भने म पनि बाँच्दिन अब । सायद आँधीखोलामा हामफालेर मर्छु म ।” उ हुँक्क हुँक्क गरेर रुन थाली ।
सकिताको आँखाबाट झरेका आँसुका बुँदहरू मीनबहादुरको कमिजको फेरमा तप्किरहेका थिए । उसका आँसुहरूले मीनबहादुरको मन रुझाइरहेको अनुभूति गहन बनिरहेको थियो ।
सकिताले उसको हात समातेर उठाई र अघि बढ्न थाली । ऊ बालकझैँ सकिताका औँला पक्डेर पछि पछि हिँड्न थाल्यो ।
बाटोमा कुनै अवरोध छैन । सकिता सुँक्कसुँक्क रोइरहेकी थिई । उसले केही प्रतिक्रिया जनाएन । घरनजिक पुगेर उसले आफूलाई फरक महसुस गर्‍यो ।
“अब भित्र हिँड । मलाई नाम देऊ तिमी । भोलि मन्दिर गएर मलाई विवाह गर । म आजैबाट प्रतिज्ञा गर्छु, तिम्रो मात्र रहने छु । हिजोसम्मको मेरो जिन्दगीको आजबाट अन्त गर्दैछु म । मलाई यौन होइन, माया चाहिन्छ । मलाई अस्थायी ग्राहक होइन, स्थायी जीवन चाहिन्छ । आऊ मलाई अपनाऊ । म तिम्रो जीवनमा नयाँ वसन्त बनेर छाउने छु । तिमीलाई जीवनका हरेक मोडमा साथ दिनेछु । म आफ्नो पवित्रतालाई पुन: प्रमाणित गरेर मात्र मर्न चाहन्छु । हिजोका पीडा र अस्तव्यस्तताहरूले अनि अभाव र बाध्यताहरूले मलाई जहाँजहाँबाट गुज्रिन लगायो, त्यो यात्रालाई म बिसाउने छु । यो जीवनको बाँकी यात्रा म तिमीबाट सुरु गरेर तिमीमै अन्त गर्न चाहन्छु । म आफूलाई सडकभन्दा भिन्न परिचयमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।”
सकिताको मनभित्र आँधी चलिरहेको थियो । ऊ निस्वार्थ र साँचो आवाज बोलिरहेकी थिई । घरबाहिर ती पुराना अनुहारहरू जम्मा भएका थिए । ऊ फटाफट भित्र पसी । “पख म नुहाएर मन्दिर पुगेर पवित्र भएर आउँछु । एक चिम्टी सिन्दुर भरिदिनु मेरो सिउँदोमा । बस् तिमी मात्र मेरो जीवनको अन्तिम मान्छे हुनेछौ ।”
घरभित्रबाट उसको आवाज हुर्रिंदै बाहिरसम्म आइपुग्यो । बाहिर जम्मा भएका अनुहारका भावहरू बिस्तारै फेरिइरहेको थियो ।
मीनबहादुरभित्र पनि सकिताप्रति माया भरिएर आयो । लामो श्वास निकालेर ऊ पिँढीको डिलमा थचक्क बस्यो । पर कतै क्षितिजमा सानो गन्तव्यको आकृति उसको आँखासम्म ठोक्किरह्यो ।
जुनेलीमाथि अन्याय भयो - अमृत सुवेदी
Seeking Unique Experiences With NAMAS Adventure
कास्कीमा नवौँ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता शुरु
आँबुखैरेनीमा पहिरो खस्यो, पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध
सरकारी सहयोग बिनै तयार भयो भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बौद्धनाथ स्तुपा
‘जीरो’ को साथमा आए सुपरस्टार शाहरुख खान
नवराज सिलवालले धान काटे, आरजूले ढकिया बोकिन्- चुनाबी चटक